ဘယ်ဟာပဲ ဖွင့်ဖွင့် Internet Explore နဲ့ပဲ ပွင့်ပွင့်နေတယ်ဗျာ။ — MYSTERY ZILLION
ဘယ်ဟာပဲ ဖွင့်ဖွင့် Internet Explore နဲ့ပဲ ပွင့်ပွင့်နေတယ်ဗျာ။
July 2012 edited July 2012 in Antivirus & Virus
ကွန်ပြူတာမှာ ရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလ် Application တွေကို ဘယ်ဟာပဲ ဖွင့်ဖွင့် Internet Explore နဲ့ပဲ ပွင့်ပွင့်နေတယ်ဗျာ။ အဲဒီဆော့ဝဲလ်ကို Open with နဲ့ တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်လျှင် အဲဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ပုံတွေချည်းပဲ Application တွေ အားလုံးကို ပေါ်တယ်ဗျာ။ ကူညီကြပါဦးဗျာ။ ဘာကိုမှ ဖွင့်လို့ မရဘူးဗျာ။ ဂျီတော့ကို ဖွင့်လျှင်လည်း Internet Explore ပဲ ပွင့်တယ်ဗျာ။
press windows + R , in Run box , type cmd and press ok.
In command prompt , type
Thank you bro, I'll try it.
ဒီမှာလည်း Error ဆင်တူတစ်ခုရှိတယ်။ သူကတော့ဖွင့်လိုက်တိုင်း windows media player တက်လာတာ။
အဲဒိမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link အတိုင်းစမ်းကြည့်ရင်ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒိ registry files တွေက extensions တွေကိုသူ့ default provider နဲ့ပြန်ဖွင့်အောင် reset လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲ။ ဘယ် software နဲ့ပွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်။
July 2012 Moderators
ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုတစ်ခါ ဖြစ်ဖူးတယ်။ ဘယ် .exe မဆို run လိုက်တိုင်း အဲ့ဒီ apps ပဲ တက်တက်လာတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ဘယ်လိုမှ ရှာမရလို့ နောက်ဆုံး SystemRestore ပြန်ခေါ်သုံးလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကို @Unkind ပြောတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော့်စက်မှာလဲ windows media player ကိုဖွင့်တာအရင်ကတော့ ကောင်းပါရဲ့ ခုတော့ သီချင်းဖွင့်ရင်